China Huge Nyowani Rori Tire Inner Tube Heavy Duty Snow Tube fekitari uye vagadziri | Florescence
Passenger Mota Tubes
Bhazi & Marori Tubes
Yekurima Tarakita & OTR Tube
Bhasikoro & Midhudhudhu Tubes
Shambira Snow Snow Sports Tubes
Huge Nyowani Rori Tiri Yemukati Tube Heavy Duty Snow Tube
44inch Yakaoma Pazasi Chando Tube NeNylon Cover
15inch Mota Tire Inner Tube 175 / 185R15
Butyl Mota Yemukati Tube 175 / 185r14 yeCar Tire
Rori Tire Korea Butyl yemukati chubhu 11.00-20
1000R20 1000-20 Rori Tire Mukati Tube
700x25C Butyl Rubber Bhasikoro Tires Inner Tube For Ro ...
Snow tubing ndiyo mhinduro hombe, yakakwana kune vakuru uye nevana masiraidhi madiki. Tubing inopfavisa mabhureki pamabump uye inopa chitubu chinonakidza kana uchidzika. Iri igungwa remufaro uye rinonakidza!
Chando tubing ndiyo mhinduro hombe, yakakwana kune vakuru uye nevana masiraidhi madiki. Tubing inopfavisa mabhureki pamabump uye inopa chitubu chinonakidza kana uchidzika. Iri igungwa remufaro uye rinonakidza!
Saizi 70cm, 80cm, 90cm, 100cm, 120cm
Chakafukidza Chinyorwa Mucheka wakavhara nePVC pasi; Mucheka wakafukidzwa nerabha rakaoma pasi
Yemukati Tube Chinyorwa Butyl
Ruvara Sechikumbiro chako
Nzvimbo yeKutanga Shandong, China
Kushandisa Vana, vakuru uye murume mukobvu
Pasuru Rakarukwa mumasaga & Makatoni
◎ Zvigadzirwa Details & Kubatsira:
Yedu chando chubhu yakagadzirirwa gore kutenderera kunakidzwa kune ese ari maviri achitsvedza nekudzika makomo uye kuyangarara pamusoro pemvura. Iyo yakasimba irabha chubhu yakasununguka kwazvo kunyangwe uri kuzorora pamusoro pemvura kana kubhururuka uchidzika negomo rakafukidzwa nechando. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kubvisa iyo chubhu kubva mubhokisi, kuifuridzira nemhepo, uye rega kunakidzwa kutange.
Iyo chando chubhu kanivhosi yepamusoro inovakwa inorema-basa 600 denier polyester kana kukwidziridza 1000 denier nylon, uye ichi chinhu chine mvura inodzora, chakuvhe chinodzivirira, uye UV yakachengetedzwa
Iwo ekutsigira anobata uye tambo-tambo inogadzirwa kubva inorema-basa polyester tambo kuruka neakakwira yakasimba tensile iyo yakasimba uye yakachengeteka.
Paunenge uchibhururuka uchidzika makomo, iwe unoda chimwe chinhu kubatirira. Nemaoko akasimba zvakanyanya akabata ayo akakwana zvakakwana kunyangwe iwo mukobvu mittens, iwe unonzwa wakachengeteka sezvo iwe uchimhanya kuti uone kuti ndiani anogona kuwana zvakanyanya kupfuura.
Rubber pazasi: edu echando machubhu anozogara makore neakaoma pasi uye yerabha inflatable chubhu.Pashure pehupenyu hwakareba, iyo plast pasi inokupa iwe nekukurumidza kumhanya.
PVC pasi: inonyanya kufarirwa muRussia.
Inogona kushandiswa kusvetuka uye kuyangarara
Heavy basa chubhu yechando, rega kutenga chando chubhu chubhu nekuti dzinobvarura kana kuwana gomba.Zvakasiyana neakasikwa rabha, butyl chubhu isina yakasimba kunhuwa, haina kukuvadza kune hutano.
Mavara akasiyana siyana aunosarudza.Uye tinogona kudhinda logo yako pabutiro
Zvigadzirwa zvakapfuura Chinese "CCC", American "DOT", European "EN71" uye "PAHS", Panguva imwecheteyo, iro bhizinesi rapasa iyo mhando manejimendi Management System Zvitupa "ISO9001", Environmental manejimendi System Zvitupa "ISO14001"
1.Q: Iwe uri Fekitori kana kambani yekutengesa?
A: Isu tiri imwe nyanzvi manufactory ine makore anopfuura makumi maviri ezviitiko mukuburitsa nekugadzira.
2.Q: Ko OEM Inowanikwa Here?
A: Hongu, OEM inowanikwa, tinogona kuita sekuenderana neBrand yako, Kurongedza, Kurema uye zvichingodaro.
3.Q: Ndeipi nguva yekuendesa?
A: mukati memazuva 15-30 mushure mekugamuchira 30% dhipoziti.
4.Q: Chii chekuita nezvinhu zvakaputsika? Iwe uchabhadhara zvinhu zvacho neyakaipa yakavambwa?
A: Tine yakakwana seti yemhando yekudzora maitiro .Kana iwe ukawana chero dambudziko rehunhu (kunze kwekukuvara kwakakomba kwechiridzwa, asidhi uye alkali ngura uye kusingaperi kweiyo UV), Ndokumbira utore mifananidzo uye utumire kwatiri, uye injiniya wedu anoongorora. idambudziko redu rekamera, tichaita muripo unoenderana.
5.Q: Samples akagamuchirwa zvakanaka, bvunzo dzakaratidza mhedzisiro, maitiro ekuvimbisa ese mirairo yakafanana mhando?
A: Usanetseke. Iyo huwandu hwehuwandu hwakaenzana nemasampuli. Nekuti iyo sampuli inotorwa kubva mukugadzirwa kwakawanda.
◎ Ruzivo rwekubata
Shary pano, ndinoda kuvaka hushamwari hurefu hurefu hukama newe. Welcome kuuya nesu, wako chero muvhunzo achava akapindura mukati maawa 12.
Chero mibvunzo, ndokumbira undizivise zvakasununguka, ndichagara ndiri pabasa rako ^ _ ^
Qingdao FLORESCENCE, WAKO BASA WAKAKWANANA !!!
Bata: Shary Li
Mhomho / WhatsApp: + 86-18205329398
Pashure: 15inch Mota Tire Inner Tube 175 / 185R15
Zvadaro: 44inch Yakaoma Pazasi Chando Tube NeNylon Cover
Yemukati Tube Yechando blower Tire
Chando chinoputira Tire Tube
Snow blower Matairi Uye Tubes
Chando Tube Ne PVC Cover
Kunze Mugwagwa OTR Tire Yemukati Tube 23.5-25 26.5-2 ...
700x25C Butyl Rubber Bhasikoro Tires Inner Tube F ...
Butyl Rubber Motorcycle Rwomukati Tube nokuda Motorcyc ...
Farmarakita terekta vhiri yemukati machubhu 16.9-30
Kamuri 1608 Dingye International Mansion
Kwete. 54 Moscow Road, Qingdao Mahara Ekutengeserana Nzvimbo